तपाईं पटाया (थाईल्याण्ड) मा एक अविस्मरणीय छुट्टी खर्च गर्न चाहनुहुन्छ र रहन एक सस्ती तर सभ्य होटल को लागि देख थियो भने, तपाईं को लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प तीन-तारे बेला एक्सप्रेस होटल हुन सक्छ।
नयाँ आधुनिक "बेला एक्सप्रेस" केन्द्रीय पटाया मा स्थित छ। वरपरको क्षेत्र मा त्यहाँ क्याफे, बारहरू, रेस्टुरेन्ट, पसल, सुपरमार्केट र औषधि पसल, यात्रा एजेन्सीहरू, मुद्रा विनिमय र वाहन भाडा, र धेरै प्रशस्त छन्। यसैले यो यात्राहरूमा जान धेरै सुविधाजनक छ। सडक घूमन सडक को लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य एक घण्टा को एक चौथाई भित्र छन्। समुद्र तट 500 मीटर छ। निकटतम विमानस्थल पटाया देखि, बैंकक मा स्थित छ 150 किलोमिटर।
आवास कोष "बेला एक्सप्रेस" 180 मानक र डिलक्स को सहज आवास समावेश गर्दछ। तिनीहरूले आवश्यक सबै संग सुसज्जित छन्। साथै, सबै अपार्टमेन्ट वाइफाइ मुक्त पहुँच छ।
होटल जक्यूजी र छोराछोरीको खण्ड, सना, मालिश कोठा, सूर्य छत, बार, रेष्टुरेन्ट र पार्किंग संग एक ठूलो आउटडोर पूल छ।
बेला एक्सप्रेस होटल: रूसी यात्री को समीक्षा
हरेक अनुभवी पदयात्री यसलाई विदेश कुनै पनि यात्रा सुरु गर्न अग्रिम योजना छ कसरी महत्त्वपूर्ण थाह छ। किनभने यो तपाईं बिदाको समयमा भेट हुन सक्छ कि धेरै जटिलताहरू र मुद्दाहरू जोगिन थियो। विशेष ध्यान अनुभवी यात्री दिइएको छ एक होटल छनौट सल्लाह। आखिर, यो हदसम्म छुट्टी को आफ्नो प्रभाव निर्भर हुनेछ। पटाया नृत्य हल मा होटल "बेला एक्सप्रेस" पहिले नै रूस देखि पर्यटक टिप्पणी सामान्यिकृत, हालै यहाँ रोक्न मौका जो बारेमा समीक्षा गर्न समय र ऊर्जा बचत गर्न। तुरुन्तै, हामी हलिडे को विशाल बहुमत यो होटल मनपराएका भनेर याद, र तिनीहरूले खर्च मुद्रा पछुताउनु छैन। तर हामी विस्तृत सबै थाहा छ।
बेला एक्सप्रेस होटल3* (पटाया, थाईल्याण्ड) मा अपार्टमेन्ट, हाम्रा सँगी नागरिक बहुमत सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई अनुसार, कोठा न्यानो उज्यालो रंग मा सजाया, एकदम विशाल र आराम गर्दै छन्। अपार्टमेंट तपाईं छुट्टी मा एक पर्यटक आवश्यक पर्दछ कि सबै कुरा छ। विशेष गरी यात्री सहज बेड र उच्च गुणस्तर लिनेन्स आवंटित। पनि विशाल रेफ्रिजरेटर र होटल भर (को कोठा मा र स्वागत मा, र पूल द्वारा), त्यहाँ वायरलेस इन्टरनेट पहुँच, जो तपाईं निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ छ भन्ने तथ्यलाई जस्तै अतिथि। र जडान गुणस्तर, यात्री अनुसार, धेरै राम्रो छ। त्यसैले तपाईं सधैं आफ्नो साथीहरू र नातेदारहरूले घर फिर्ता सम्पर्कमा हुन सक्छ। साथै, अतिथि सहज balconies, सबै अपार्टमेन्ट उपलब्ध लाईक। यहाँ तपाईँले रहन र कफी वा रक्सीको गिलास एक कप एउटा व्यस्त दिन पछि आराम गर्न सक्छन्। तथापि, अतिथि भन्न रूपमा, सुंदर दृश्य सबै कोठा को घमण्ड गर्न सक्दैन, तर यो कसैले गम्भीर समस्या लागि गरे।
हाम्रो सँगी नागरिक कुनै उजुरी थिएनन् को भाग मा नौकरानियां "बेला एक्सप्रेस" काम गर्न। त्यसैले, तिनीहरूले भने, यो कोठा हरेक दिन साफ गर्दै छन्, र एकदम राम्रो - कम से कम, को फर्श नियमित साफ छन्। साथै, नौकरानियां हरेक दिन तौलिया परिवर्तन। ओछ्यान तन्ना एक हप्ताको धेरै पटक अद्यावधिक गरिएको छ। को नौकरानियां को बेड तौलिया देखि हास्यास्पद आंकडे मा नियमित रूपमा निर्माण गर्दै भन्ने तथ्यलाई जस्तै पाहुनाहरूलाई। खैर, सेवा गुणस्तर तथ्यलाई मा पूर्ण निर्भर छ, तपाईं एक टिप छोड्ने वा छैन।
रूपमा खर्च नौकरानियां बाथरूम मा व्यक्तिगत स्वच्छता (toothbrushes, शवर जेल, साबुन, स्याम्पु, शौचालय कागज, र यति मा। पी), साथै चिया वा कफी लागि किरा सामग्रीहरू restock हुनेछ। खैर, कोठा मा त्यहाँ कप, saucers र चम्मच छन्। को कोठा मा कुनै केटल्स। तर प्रत्येक तल्ला मा त्यहाँ तातो पानी संग एक कूलर छ।
तपाईं अतिरिक्त केही गर्न आवश्यक छ भने, तपाईं स्वागत मा दासी वा व्यवस्थापक बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ। प्रायजसो, यो भुक्तानी गर्न हुनेछ। यसरी, उदाहरणका लागि, फलाम अतिथि 30 THB लागत।
मा सार्ने, प्रस्थान
बेला एक्सप्रेस होटल3* (केन्द्रीय पटाया) प्रायजसो, चेकआउट समय सेट भन्ने तथ्यलाई बावजुद, नयाँ अतिथि को आगमन पालन गरेनन्। त्यसैले, तपाईं बिहान होटल गर्न आइपुग्छन् भने, त्यसपछि सबै भन्दा संभावना छ, तपाईं सकेसम्म चाँडो कोठा विश्वास गर्न तपाईंलाई समायोजित गर्न प्रयास गर्नेछ। त्यसैले, तपाईं घर देखि प्रमुख प्राप्त गर्न एक दिन दुई घण्टा प्रतीक्षा छैन। आवरण होटल भरिएको छ र अघिल्लो अतिथि कोठा खाली थिएन भने मात्र उठ्न सक्छ। आगमन मा तपाईं जम्मा भुक्तानी गर्न आग्रह गरिने पनि ध्यान दिनुहोस्। यसको रकम 1000 भाट छ। आफ्नो प्रस्थान दिन मा होटल कर्मचारी आफ्नो नम्बर जाँच गर्नेछ, र सबै क्रममा छ भने, जम्मा पूर्णतया तपाईं फिर्ता गरिएको छ। तर, यदि तपाईं, उदाहरणका लागि, भाँडा तोड्न वा आफ्नो छाता गहिरो दाग लागेको ओछ्यान तन्ना गुमाउनु, त्यसपछि निर्दिष्ट रकम प्रशासकलाई क्षति ढोका क्षति को मात्रा कटौती गर्न सक्नुहुन्छ।
सामान्य मा होटल देखि प्रस्थान दिन दिउँसो अघि हुनुपर्छ अपार्टमेंट खाली। यस मामला मा, तपाईं साँझ होटल छोड्न योजना भने, तपाईं कुञ्जीहरू कोठा लागि, सामान भण्डारण कोठामा कुराहरू छोडेर प्रस्थान को क्षण सम्म आराम गर्न जारी राख्न लाग्न सक्छ।
यो होटल मा रहन को लागत मात्र नास्ता समावेश छ। हाम्रो compatriots अनुसार, तिनीहरूले हरेक दिन पटक-पटक गर्दै छन्, तर तपाईं लगातार आफ्नो मेनू विविधता सकून् व्यञ्जन र उत्पादनहरु को विकल्प पर्याप्त व्यापक छ। त्यसैले, पर्यटक बिहान "बेला एक्सप्रेस" तिनीहरूले मासु, कुखुरा र माछा, पास्ता, चाउचाउ, सलाद, पनीर र ससेज मासु, विभिन्न भेरिएसनहरूमा, ताजा फल र तरकारी, रस मा अन्डा को व्यञ्जन खान सक्षम थिए कि सम्झना, कफी , चिया, स्वादिष्ट पेस्ट्री र मिठाईहरू। त्यसैले, होटल मा एक राम्रो नास्ता लिन, तपाईं खाने सम्म खान चाहनुहुन्छ छैन।
यस समयमा दिन, पर्यटकहरु रेस्टुरेन्ट "बेला एक्सप्रेस" मा खाना, र आसपास क्षेत्र र पटाया को केन्द्र मा स्थित क्याफे, मा गर्न सक्नुहुन्छ। यात्री पनि धेरै पर्यटन भोजन र कहिलेकाहीं खाने समावेश उल्लेख गरे। साथै, तपाईंले सधैं सक्छन् उत्पादनहरु makashnits मा सहरका सुपरमार्केट वा खाजा मध्ये एक मा खरिद बाहिर केहि (खाना मोबाइल किओस्क)।
बेला एक्सप्रेस होटल (पटाया) बाट निकटतम बीच दूरी बारेमा 500 मीटर छ। यो बाटो खुट्टा (लगभग 15 मिनेट), र tuk-tuk, ट्याक्सी वा भाडा motoskutere मा हटाउन सकिन्छ। यहाँ समुद्र तट हाम्रो compatriots, धेरै ठूलो छ, ठीक बालुवा र पर्याप्त सफा अनुसार छ। त्यसपछि तपाईं बालुवा, एक ओछ्यानमा चटाई र parasol सेट मा सही मा रहन सक्छ। नजिकै समुद्र तट तपाईं खान र संग उपचार गर्न पिउन सक्नुहुन्छ जहाँ क्याफे र बारहरू प्रशस्त छन्।
धेरै यात्री "बेला एक्सप्रेस वन्टेड" कर्मचारीहरु तिनीहरूलाई अत्यन्तै सुखद अनुभव बाँकी भन्छन्। यसरी, यात्री अनुसार, होटल कर्मचारी सधैं पाहुनाहरूलाई धेरै ध्यान दिएर, हँसिलो, अनुकूल छन्। तपाईं कुनै प्रश्न संग सीधा होटल सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूले सधैं तपाईंलाई मदत गर्न यथासक्दो गर्छन्। तथापि, रूस देखि पर्यटकहरु र अन्य सीआईएस देशहरुमा द्वारा उल्लेख रूपमा, अतिथि यहाँ को बहुमत - यो भारत बाट पर्यटकहरु छ। तसर्थ, मा रूसी कर्मचारीहरु लगभग बुझेनन्। तर, हाम्रो मान्छे अंग्रेजी को आधारभूत ज्ञान पर्याप्त हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्।
होटल "छुट्टी Inn" (Sokolniki, मास्को): विवरण, ठेगाना, समीक्षा
अङ्गुर कार्डिनल: आकर्षक सुविधाहरू
तयारी rassolnik - रहस्य प्रकट!
टर्की। होटल "ग्रीन हिल" - बाहिरी गतिविधिहरु लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो!
के बजार अनुसन्धान एक कल सेन्टर को मद्दतले बाहिर गर्न सकिन्छ?
बिन्दु मायो-Robson: अग्नाशयी क्षेत्र